I-jam ecocekileyo neyiluncedo esuka kwi-raspberry: iingcebiso ezilungileyo kunye neempendulo ezibonakaliswe kubaphathikazi.
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Recipes Simple
Jam kwi-raspberry - zokupheka ngokukhawuleza
iresiphi ye jam-like jam
Iphunga le-raspberry elicocekileyo, elilungiselelwe ngenyameko ngonina kunye nogogo, luhlobo olulungileyo kunye nolutsha olunolonwabo lwabaninzi bethu. Ukongeza kwiinambatho ezingaqhelekanga, ezi zijikijolo zithathwa ngokufanelekileyo njengegumbi lokugcina elisebenzisekayo kunye namavithamini, ngenxa yoko kukhuthazwa ukuba badle ngexesha lokugula. Ngoko ke, siza kubonisa iindlela zokupheka ezilungileyo, indlela yokwenza i-raspberry jam, engayikuvuyisa umphefumlo nje kuphela, kodwa inokuzuza nomzimba.
Iresiphi ye-Classic "kwemizuzu emihlanu"
Ngaphambi kokuba uqale ukulungiselela i-dessert, kuyimfuneko ukucacisa ukuba ezi zijikijolo zizona zintle kunazo zonke, ngoko ke akuvumelekanga ukugaya okanye ukulimaza izandla. Siza kubonisa indlela elula yokupheka okunjalo, okuza kwenza ukhathalelo olucebile kwaye oluhle.
i-raspberry - 800 g
ushukela - 1 kg
I-Butter - 20 g
Lungisa kwaye ukhethe amajikijolo ukuze zonke zitshatsha kwaye zome.
Emva koko uzithumele kwisitya esahlukileyo uze ubeke umlilo omncinci ukwenzela ukuba i-malinka ivumele ijusi ize ityelele.
Phezulu kunye noshukela kwaye uqhubeke udibanisa kwisitofu kude kube ngumzuzwana. Nangona kunjalo, musa ukuzisa kwi-thumba!
Yongeza ke ibhotela.
Qinisekisa umlilo kwi-burner kwaye, ngaphandle kokuyeka ukuphazamisa iziqulatho, yizisa isiraphu kwindawo ebilayo.
Xa i-jam iqala ukubilisa ngamandla, kuyimfuneko ukufumana ixesha.
Ukuvuselela ngobumnene ukuphuza, ulinde imizuzu engama-4 uze uyinciphise ubushushu.
Emva kweminye imizuzu emi-3-5, susa i-jam kwisitya.
Qalisa ukuthululela kwiimbiza ezinamanzi kwaye uvale izikhalazo.
I-raspberry jam ecocekileyo kwaye iluncedo ikulungele! Ukukhonza itiye okanye njengomsila wefritters.
I-Recipe ye-jam-jam efana ne-raspberry
Ngokuqinisekileyo, unokulungiselela i-raspberry jam ngeendlela ezininzi zokupheka, kodwa indlela elapha ngezantsi iza kukuvumela ukuba wenze udidi olukhethekileyo lwezolimo. Uhlobo lwe-Zhelepodobnoe luba ngumbala oqaqambileyo kunye nephunga elimnandi kunye nokungaqhelekanga okungaqhelekanga. Enye yeendlela zokulungiselela le dessert kukuba kuyimfuneko ukuqokelela ama-berries avuthiweyo kuphela, kodwa kunye neziqhamo ezivuthiweyo, njengoko ziya kunika izakhiwo ze-jelly kwi-jam.
raspberry 1.5 kg
Ukupheka i-jam kwi-raspberries kule recipe kuyimfuneko kwiindlela ezimbini.
Umsebenzi wokuqala ukulungiselela amajikijolo, uwathulule kwisitya esingenasici kwaye ungeze 2/3 iswekile ngaphezulu. Kulo rhulumente, kufuneka bashiywe kwiiyure eziyi-1.5-2, ukwenzela ukuba isiqhamo sivunyelwe ukuba sibe nejusi.
Emva koko faka ipaka emlilweni obuthathaka kwaye, ngokukhawuleza uvuselele isiraphu, uyizise kwimathumba.
Emva kokuba iswekile sele iyancibilika, galela i-jam imizuzu emihlanu uze ususe kwi-plate.
Emva koko, i-brew kufuneka ishiywe ize ipholile ngokupheleleyo phantsi kweqondo lokushisa. Oku kulungele ukulungiswa ngokuhlwa, ukwenzela ukuba i-jam ebusuku ibanda, kwaye ufumene amandla okukhusela.
Ekuseni kuza isigaba sesibini sokupheka: kwakhona ufake isiraphu ye-raspberry kwisitofu uze uyibuyise ngethuba.
Kancinci uphulule lonke ushukela kwaye unyuke ngobumnene iziqulatho.
Ukushisa emlilweni imizuzu engama-7, ususe kwaye ushiye umjelo ukuze uphole.
Uhlobo lukaZhelepodobnoe lukulungele! Thele phezu kwezimbiza ezinamanzi kwaye uqhubeke nokucinywa.
Ncedisa i-dessert ekhethekileyo yeeyi, njenge-sauce yee-pancake kunye ne-fritters, yongeza kwi-pastries kwaye ungadli nto. Jabulela umdla wehlobo!
Indlela yokwenza i-Sauce ye-Worcestersky: zokupheka kunye neefoto kunye nemiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo
Iindlela zokupheka ezingcono kakhulu zeklabishi eKorea
Iindlela zokupheka ezona zilungileyo ngokukhawuleza
Indlela yokwenza iityuwa zetyuwa: zokupheka. Imithetho kunye neemfihlelo zokukhetha okuphumelelayo
Iimpawu ezifihlakeleyo zesondo zabesetyhini
Ungaze uthi yebo, xa ufuna ukuthi cha
I-Glaucoma kunye ne-cataract: ukuxilongwa, unyango, ukuthintela
Inkukhu kunye nemifuno
Iihotele ezilungileyo kwihlabathi
Uhlobo okanye isitayela esingaqhelekanga? Ndifanele ndihambe esikolweni?
Ziziphi iimbadada endingazikhethayo kumantombazana amfutshane?
Siwunqobe iintloni kunye nentloni yabantwana
Imikhombiso yeFestile: ngoFebhuwari, Matshi
Iingxaki zesondo kunye namadoda
Abahlali abaqhelanisiweyo: imiba yokuhambelana kwamadoda nabasetyhini
Indlela yokujongana namanqaku atyula ekhaya
Indlela yokutya ngokufanelekileyo xa wenza ukufaneleka nokudansa
Indlela yokukhetha iilazi ukuze ubhekane nazo